အသက် ၃၂ ​​- (အမျိုးသမီး) Rebooting သည်ကြာရှည်စွာတည်မြဲသော fetish ကိုရှင်းလင်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အသက် ၃၂ ​​- (အမျိုးသမီး) Rebooting သည်ကြာရှည်စွာတည်မြဲသော fetish ကိုရှင်းလင်းရန်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ငါရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော် nofap ထဲရောက်နေပြီ။ ငါလုပ်နိုင်ထင်ထက်ပိုပြီးနည်းလမ်း။ ငါလုပ်တာထက်ပိုပါတယ် စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည့်ယခုအချိန်တွင် M အားတိုက်တွန်းမှုသည်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်။
ငါ့ဘဝမှာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သူငယ်ချင်းတချို့ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာငါအိပ်နိုင်တယ်။ အော်ဒီယိုစာအုပ်နားထောင်တာကိုသွားအိပ်နိုင်တယ်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ကိုပြန်ယူ, ငါ့အချိန်!
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဘဝမှာမကြာခဏဆိုသလိုဒီစွဲလမ်းမှုဟာဒီစွဲလမ်းမှုကိုထပ်မံကူးစက်စေလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲလိုအပ်ချက်အရအားကောင်းတဲ့အစပျိုးမှုတချို့ကိုကျွန်တော်တကယ်ရောက်နေပြီ။ ငါ fetish ပတ်ပတ်လည်ရှိခဲ့အရာ m နှင့် o ကနေနှင့်အလွန်အကျွံစိတ်ကူးယဉ်ကနေကွဲကွာလျက်ရှိသည်ပုံရသည်။ အားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်လူသား, ပိုကောင်း!
ဒါကကြီးမားတဲ့သက်သာမှုပါ။ ငါမှတ်မိနိုင်သမျှကာလပတ်လုံး fetish နဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ငါ fetish မှာစိတ်ခံစားမှုအတော်အသင့်ရှိတယ်၊ လိင်ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ကူးယဉ်တွေနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ငါ fetish ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်းအရာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါဒါကိုခွဲထုတ်နိုင်တယ်၊ အဲဒီအတွေးကလိင်မှုကိစ္စကိုတက်ကြွစေနိုင်တယ်လို့လက်ခံနိုင်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို ဦး တည်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
နောက်ထပ်မရောင့်ရဲနိုင်သည့်နောက်ထပ်မျှော်လင့်မထားသောရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းပိုမိုကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ nofap လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အခြားပြproblemsနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ဒီအပြုအမူတွေအားလုံးကနေခွဲထွက်လိုက်တာကငါဟာ porn နဲ့ m-related တို့လိုငါခံစားခဲ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခံစားချက်တွေကိုကြည့်ရှုစေတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာဖြေရှင်းရမယ့်ပြproblemsနာအချို့ရှိတယ်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက SAA အစည်းအဝေးတွင်ကြားခဲ့ရသောလိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အားသတိပေးသည် -“ ငါ့ရဲ့မီးဖိုချောင်မှာအနံ့ရှိနေရင်ငါအဲဒါကိုအာရုံလွဲသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မီးဖိုချောင်မှာအနံ့ရှိနေ ဦး မှာပဲ”
ငါအနံ့အားလုံးရှာနေတာ။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာငါထင်ထားသလိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့တတ်နိုင်သမျှတိုက်ရိုက်နှင့်ရိုးသားစွာချဉ်းကပ်တာပါ။
LINK - ပြန်ဖွင့်နှစ်ရှည်လများ fetish ရှင်းလင်းရန်အလုပ်လုပ်နေပါသည်!